Xildhibaan Ibraahim Isaaq Yarow “Go’aankii Baarlamaanka Koonfur-Galbeed waxaa uu ahaa mid taariikhi ah” – Kalfadhi
Xildhibaan Ibraahim Isaaq Yarow “Go’aankii Baarlamaanka Koonfur-Galbeed waxaa uu ahaa mid taariikhi ah”
Xildhibaan Ibraahim Isaaq Yarow, oo kamid ah Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku tilmaammay go’aankii xildhibaannadda Baarlamaanka maamulka Koonfur-Galbeed mid taariikhi ah, kaddib markii xildhibaannadda ay muddo sannad ah u kordhiyeen madaxweynaha, si hal xili ay u dhacdo doorashooyinka Madaxweyynaha iyo tan Baarlamaanka.
Koonfur-Galbeed waxaa uu ahaa maamulka keliya ee Madaxweynahooda iyo Baarlamaankooda aan isku wakhti la dooranin, iyadoona arrintaasi ay ku timid, habkii aas-aaska maamulkaasi loo maray. Madaxweynaha maamulka waxaa soo doortay ergooyin, iyadoo aanu jirin Baarlamaan.
“Go’aanka xildhibaannadda waxaa uu ahaa mid taariikhi ah, taasoo ay isla ekeysiiyeen xili doorashada madaxweynaha iyo xildhibaannadda. Koonfur-Galbeed waxaa ay aheyd maamulka keliya ee Madaxweynahooda iyo Baarlamaankooda isku wakhti aan la dooranin”, ayuu yiri xildhibaanka.
Xildhibaanno gaaraya 30 mudane oo shalay xaadiray kulankii Baarlamaanka ee uu shir-guddoominayay Guddoomiyaha Baaralamanka Dowlad Goboleedka KGS Dr. Ali Siciid Fiqi iyo labadiisa ku-xigeen, ayaa dood dheer kaddib ansixiyay in muddo hal sanno ah loo kordhiyo madaxweynaha.
Kulanka oo ay soo xaadirtay 87 mudane, ayaa dhammaan xildhibaannadda ay u codeeyeen in hal sanno loo kordhiyo madaxweynaha, mana jirin xildhibaan ka aamusay ama diiday, sida uu ku dhawaaqay Guddoomiyaha Baarlamanka Dowlad Goboleedka KGS Dr. Ali Siciid Fiqi.
Baarlamaanka Koofur Galbeed oo muddo kordhin u sameeyay Madaxweyne Lafta Gareen
Maxamed Mursal “Guddoonka Baarlamaanka marna kuma fakarin in muddo kororsi ay sameeyaan, xaqna uma laha in ay ku fakaraan”